ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာမီဒီယာများကို လူထုစိန်ဝင်း ဝေဖန် | MoeMaKa Burmese News & Media
အာရ်အက်ဖ်အေမြန်မာပိုင်း အလွဲသုံးမှုများကို စုံစမ်းရန် လက်မှတ်ထိုးကင်ပိန်းပြုလုပ်
မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၂
ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာများကို သတင်းစာဆရာ လူထုစိန်ဝင်း ဝေဖန်သည့် သတင်းကို Messenger ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
7 Responses to ပြည်ပအခြေစိုက် မြန်မာမီဒီယာများကို လူထုစိန်ဝင်း ဝေဖန်
Aung Myint on March 26, 2012 at 5:23 am
Very good and please show the article like the others easily seen when it is clicked.
Ba Khin on March 26, 2012 at 6:59 am
U Sein Win .
I agree with you in this matter.
pn wara on March 26, 2012 at 2:25 pm
ကိုဇော်ကျော် on March 26, 2012 at 12:29 pm
ရုံးတော်ကိုမထေ့မဲ့မြင်ပြုမှုဆိုတဲ့ တရားရုံးတော်များကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေဟာ ဒီမိုကရေစီကိုဆန့် ကျင်ခြင်းမဟုတ်သလို၊ မီဒီယာများကိုတုပ်နှောင်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းရဲ့မရှိ မဖြစ်ဥပဒေတစ်ရပ်ပါ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိပါတယ်။
ohnmar on March 26, 2012 at 3:36 pm
ိဝင်းစိန် on March 26, 2012 at 9:48 pm
Lin on March 26, 2012 at 10:21 pm
“ရုံးတော်ကိုမထေ့မဲ့မြင်ပြုမှုဆိုတဲ့ တရားရုံးတော်များကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေဟာ ဒီမိုကရေစီကိုဆန့် ကျင်ခြင်းမဟုတ်သလို၊ မီဒီယာများကိုတုပ်နှောင်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းရဲ့မရှိ မဖြစ်ဥပဒေတစ်ရပ်ပါ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိပါတယ်။”
Yes, but every country uses it as for justice not like in Burma which is used for their own profits.
We must need all laws, rules and regulations only for justice. That’s why he said.